Inona ny antony mahatonga ny tsy fivadihana ara-pihetseham-po | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/09/2021 22:39 | fifandraisana
Matetika ny ankamaroan'ny olona dia mampifandray ny tsy fivadihana amin'ny sehatry ny firaisana, Na izany aza, ilay fantatra amin'ny hoe tsy fivadihana ara-pihetseham-po dia mety hitranga ihany koa. Amin'ity tranga ity, ny famadihana ny mpiara-miasa dia mitranga amin'ny fomba mahomby. Ilay tsy fahatokiana ara-pihetseham-po voalaza etsy ambony dia sarotra kokoa ny mamantatra azy noho ny tsy fivadihana ara-nofo ary mahazatra kokoa noho ny noeritreretinao azy.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba io karazana tsy fahatokiana io isika, ny antony mahatonga azy ary ahoana no handresena azy.
1 Fivadihana ara-pihetseham-po na fiatraikany
2 Inona avy ireo antony mahatonga ny tsy fahatokiana ara-pihetseham-po
3 Ahoana ny fomba hialana amin'ny fivadihana ara-pihetseham-po
Fivadihana ara-pihetseham-po na fiatraikany
Toy ny tsy fivadihana ara-nofo, ny fivadihana ara-pihetseham-po dia famadihana lehibe ho an'ny mpivady ary matetika no mitarika ny ankamaroan'ny fisarahana ankehitriny. Amin'ny tsy fivadihana ara-pihetseham-po dia misy famitahana amin'ny mpiara-miasa, satria misy fomba fiasa ara-pihetseham-po sy misy fiatraikany amin'ny olona fahatelo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, voalaza fa tsy fahatokiana satria ny iray amin'ireo mpiara-miasa irery am-pientanam-po.
Ny tsy fahatokiana ara-pientanam-po dia mety hiteraka fanaintainana lehibe ho an'ilay olona mijaly amin'izany. Izy io dia azo heverina ho matotra kokoa noho ny tsy firaisan'ny lahy sy ny vavy ary misy ny fandaozana tanteraka ao anatin'ireo singa roa mampihetsi-po sy miantra. Ny olana lehibe amin'ity karazana tsy fahatokiana ity dia noho ny zava-misy izay manahirana kokoa noho ny tsy fitadiavana firaisana ara-nofo.
Betsaka ny antony na antony mety hahatonga ny olona hamitaka ny vadiny. Tsy fahampian'ny serasera ary tsy afaka maneho fihetseham-po samihafa, dia mety hahatonga ny olona hanapa-kevitra ny hitady fitiavana ao ivelan'ny fifandraisana. Ny tsy fahampian'ny famantarana ny fitiavana na ny fitiavana ao amin'ny mpivady dia matetika antony iray hafa mahatonga an'io karazana tsy fahatokiana io. Tsarovy fa ny fitiavana dia tsy maintsy karakaraina isan'andro ary indraindray ny tsy fahampian'ny fotoana dia mahatonga ny olona maro hiafara amin'ny fanaovana tsinontsinona ny fifandraisany amin'ny olon-kafa.
Ny mahazatra sy ny monotony ao anatin'ny mpivady dia antony iray hafa mahatonga ny tsy fahatokisana ara-pihetseham-po. Ilay ampahany mijaly amin'ny fahasosorana toy izany, manapa-kevitra ny hijery any ivelany ho an'ny zavatra tsy ananany amin'ny fiarahana. Ny zavatra mahazatra dia ny hoe raha salama ny mpivady ary misy fifandraisana tsara eo amin'izy ireo dia tsy hitranga ilay tsy fahatokiana ara-pihetseham-po voalaza etsy ambony.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fivadihana ara-pihetseham-po
Toy ny amin'ny firaisana ara-nofo, tena sarotra ny afaka mandresy ny tsy fivadihana tsy misy fiatraikany. Amin'ny tranga sasany, io famitahana io dia matetika midika hoe ny fiafaran'ny mpivady ary amin'ny tranga hafa dia ezahana ny mitady vahaolana hanavotana ny fifandraisana. Zava-dehibe ny famerenana indray ny serasera tsara ary hiteny mazava tsara amin'ilay mpiara-miasa.
Amin'ny voalohany dia mety ho mafy nefa ilaina ny manilika ny hatezerana, lolom-po na lolom-po ary manandrana mamadika ny pejy faran'izay haingana. Ny fangatahana famelana heloka ary ny fanekena izany famelan-keloka izany no ilaina sy ilaina, mba ahafahan'ny mpivady mihodina indray tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Inona avy ireo antony mahatonga ny tsy fahatokiana ara-pihetseham-po